Samsung Odyssey G7: Yechokwadi kwazvo mutambo wemitambo | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 21/04/2021 18:00 | General, Reviews
Pakupera kwegore rapfuura kambani yekuSouth Korea yakaratidza nhevedzano yezvigadzirwa zvemitambo uye kunyanya huwandu Odyssey, zvidzitiro zvechinangwa ichi izvo izvo zvakatemerwa zvinotsanangudzwa nevashandisi kuti vabudirire kubva mumitambo yavo yevhidhiyo.
Ino nguva isu tave patafura yekuyedza iyo nyowani Samsung Oddysey G7, yepamusoro-kumagumo yakakomberedzwa yekutarisa yakanyatsogadzirirwa mutambo. Tsvaga nesu kuongorora kwayo kwakadzika uye uzive kukosha kwekutenga kwako. Isu tinokuudza zvatinofunga uye nemhedzisiro yekuongorora kwedu yanga iri.
1 Dhizaini uye zvigadzirwa: Kuvavarira "mutambo"
2 Panel technical technical maitiro
3 Kugadziriswa nekubatana
4 Shandisa ruzivo uye kukoshesa
Dhizaini uye zvigadzirwa: Kuvavarira "mutambo"
Kutendeseka, iyo tsika yekuwedzera akawanda maRGB maLED kune zvese zvine chinangwa chekuve "mutambo" chinhu chisingakodzere kwandiri kunyanya, ndinofarira zvine hungwaru dhizaini. Nekudaro, Samsung yakwanisa kusimudzira iyi pfungwa pasina kuwanda fanfare uye izvo zvakatotishamisa zvine simba. Isu tinotanga nekutarisa chimwe chezvinhu zvakasiyana zvakanyanya, iyo 1000-millimeter curve iyo ndiyo yakanyanya kutaura maererano nema curved monitors. Izvi zviri kuwedzera pakuderedzwa kwedivi uye epamusoro mafuremu pamwe nehasha dhizaini pazasi, yakapetwa nemaviri RGB ma LED skrini kumagumo ese.
Weight yakazara: 6,5 Kg
Vipimo hwaro hweukobvu: 710.1 x 594.5 x 305.9 mm
Mumadziro ekumashure isu tine rutsigiro rwakavakirwa-zvakanaka rune unopfuura waya, uyezve iyo RGB LED mhete imwezve nguva, iyo ine trim iyo inozokanganisa mwenje. Izvi zvichave zvakadzikira muzviitiko zvese uye zvinonyanya kucherechedzwa patinotaura nezvekuishandisa zvachose murima, ichave iri mamiriro ayo anozoonekwa pamadziro. Hwaro hunogadziridzwa pakukwirira kusvika pamasentimita zana nemakumi maviri uye unokwanisa: kurereka pakati - 120º na + 9º, tenderera - 13º na + 15º uye pivot pakati pe -15º na + 2º. Iyo yekutarisisa inovakwa kunyanya yepurasitiki nhema ine simbi inopedzisa kusimba.
Panel technical technical maitiro
Isu tinotanga, zviripachena, neepaneru yekutarisa iyo ingangodaro inonyanya kukosha pakati pezvakanyanya zvinhu. Tine mhando ye 31,5-inch VA pani na a 16: 9 chimiro chaizvo. Iyi mapaneru eAA uye dhizaini yayo yakanyanyisa kukomberedza inoita kuti inakirwe chete mukubwinya kwayo kukuru patinozvimisa zvakanaka pamberi payo, isu tinofanirwa kukanganwa nezvekuishandisa kubva pamubhedha kana kubva pamapoinzi asiri akananga pakati. Mune ino tarisa Samsung yasarudza iyo QLED, tekinoroji yakawana budiriro zhinji kwazvo.
Iyo yekuzvarwa resolution yemonitor ndeye 2560 x 1440 pixels, Izvo hazvina kushata zvachose kuti unakidzwe neinotevera-chizvarwa PC mitambo, pamwe nekuenderana zvachose nemidziyo yakadai sePlayStation 5. Tine panguva ino kupenya kwepakati pe 350 cd / m2 ine huwandu hwakawanda hwe600 cd / m2 pane mamwe makona. Kusiyanisa reshiyo kunosvika kusvika 2.500 1: XNUMX kuti isu hatifarire zvakanyanya, ehe, kuwiriranisa kwepaneru kuchaenderana ne NVIDIA G-Sync uye AMD FreeSync kuenderana.
Iyo ine simba renji yarinopa, mune yako HDR600 Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti isu hatina kuzviwana zvichinyanyisa kurova futi. Iyo yekuvandudza mwero, ehe, ndiyo yepamusoro pamusika pasina kuwedzeredza, inosvika kusvika ku240 Hz. Kune rimwe divi, pa240 Hz isu tinogona kungoishandisa chete nekudzika kwemavara e8 bits, isu tinofanirwa kuenda pasi kune ine mwero 144 Hz kuti tinakirwe ne10-bit pani. Pane rimwe divi.
Iyi yekutarisisa ine integrated software system kuti ishandiswe nemufaro wemudhara pazasi. Mariri tichawana marongero ese ari maviri padanho rekubatana uye kumisikidzwa, kunyangwe iwo asina kunge airatidzika kunge akawandisa. Isu tinokwanisa kubata zororo rehuwandu hwezvinhu pakati pevamwe. Mariri tichaona munguva chaiyo iyo "impu-tlag" iyo mune chero zviyero yakaramba yakamira muma1ms kunyangwe mumiyedzo yedu.
Kufambira mberi kune kubatana, isu ticha tsvaga maviri akaenzana-saizi USB 3.0 chiteshi, chinyakare USB Hub chiteshi kana tichida kuwedzera imwe mhando yekuwedzera kunakidza kuwedzera, pamwe neAva DisplayPort 1.4 madoko uye HDMI 2.0 chiteshi. Iwe hauzopotsa zvachose chero chinhu, kunze kwekunge iwe uchitsvaga kurira, iwe unenge uine headphone kuburitsa asi kanganwa nezvevatauri. Kuti uwane zvimwe, Nekusanganisira chete HDMI chiteshi, isu taigona kana kuwana imwe snag kana tichiwedzera bharanzi kuvandudza ruzivo rwedu rwese.
Shandisa ruzivo uye kukoshesa
Nechimwe chinhu chakanyanyisa isu tinogara tine chinotapira kuravira. Mune ino kesi kukwirira kwayo kwakakwirira ndiko kuda kana kuvenga. A 1000R curve inoita yakawanda pfungwa pane yakadaro yekutarisa, kunyangwe hazvo pasina munhu akamboiyedza kusvika zvino. Ichi chinovhara chinotiputira zvakakwana uye chinotora mazhinji enzvimbo yedu yekuona, izvi zvine mukana wakajeka pane kutamba. Iyo yekutanga pfungwa mushure mekutanga kusangana neiye mutariri ndeimwe yekushamisika kwechokwadi, zvisingaite kuti usashamisike.
Unozvijairira nekukurumidza, kunyanya kana uchingozoishandisa kutamba. Paunoronga kushanda naye, zvinhu zvinochinja, uye ndizvo nekuda kwechikonzero ichi, yakawedzerwa kune yayo yakakombama curvature, inova pane isinganyanyoita zvine mutsindo yekutarisisa, yakanyatsogadzirirwa chinangwa chayo, «mutambo». Kunyudza kwakakwana, asi kwakagadzirirwa chete uye kune vega vatambi. Nekudaro, kuve nemamonitor maviri eiyi saizi padesktop kunoita kunge kwakaoma, saka unofanirwa kuve wakajeka nezve mutengo wekubhadhara kana wafunga kuushandisa kune zvimwe zvinangwa, nekuti kutarisa mafirimu munzvimbo yemutambo kunogona kunge kusiri iko kwakanyanya kugadzikana.
Pataive tichiita ongororo, takave nechokwadi chekuti Samsung yaburitsa firmware yekumonita, izvi zvakaiswa nyore nyore kuburikidza nechero zviteshi zveUSB uye zvinopa chiratidzo chakanaka chekutsigirwa icho chainacho kumashure. Nekudaro, iwo mutengo kupenga chaiko, unongowanikwa chete kune avo vanoda kushandisa zvakanyanya kugona kwavo mune izvi,Samsung G7 (C32G73TQSU) ...
Uku kwave kuri kuongorora kwedu kwakadzama kweSamsoni yaOdyssey G7, yakanyatso tarisa uye yakanyanyisa kutarisa kune vakawanda vatambi, yeuka kuti unogona kutisiira chero mibvunzo mubhokisi remashoko.
Yakatumirwa pa: 21 April 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 18 April 2021
Yakanyanya radical curve
Kukwikwidzana kwepamusoro uye yakanaka zororo reti
Technical rutsigiro uye dhizaini yakanaka
Mamwe akawanda madoko aripo
Mutengo mukati mekusvikwa nevashoma
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Samsung Odyssey G7: Yechokwadi kwazvo yemitambo yekutarisa
Roborock S7: Yakakwira-kumagumo kuchenesa ikozvino neiyo ultrasonic kukwesha